साउदी र ओमानमा रोजगारी कटौती, अब विदेशीले गर्न पाउँदैनन् यी काम
आफ्ना नागरिकलाई रोजगारको व्यवस्था गर्न साउदी अरब र ओमनले विभिन्न क्षेत्र र पेसामा विदेशी कामदार राख्न नपाउने नीति ल्याएको छ । कान्तिपुर दैनिकका अनुसार साउदी र ओमनले सामान्य काममा पनि आफ्ना नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्न नीति ल्याएपछि विदेशीले अवसर नपाउने भएका हुन् । साउदीले १२ वटा क्षेत्र र ओमनले ८७ वटा
परदेशी भूमिमा दुई जना नेपालीहरुको मृ्त्यु : कारण के हुन सक्छ सुत्दा कहिल्यै नबिउँझने गरी सुतेको सुत्यै हुने !
धादिङ जिल्ला घर भई हाल मलेसिया जोहरभारू मुहार बातुलापन मा दुख:शुख पर्देशी जीवन चलाई रहनु भएका आकाश तामाङ 2017/11/11 तारिक बेलुकी खाना खाई वरि सुत्नु भएको थियोतारिक बिहान सुतेको सतेकै हुनुभएकोले हामी सवै नेपाली दाजु भाई दिदी वहिनी र घरपरिवार मा सवैलाई रुवाएर यो संसार छाड्नु भएको हुनाले हामी सवै
अपडेट:नेपाली कामदार बोकेको गाडी पोर्चुगलमा दुर्घटना:चितवनकी चेतमायाको मृत्यु, ५ घाइते
काठमाडौँ पोर्चुगलमा नेपाली कामदारहरू बोकेर नियमित काममा हिँडेको गाडी मन्तेजो पिकोइसमा पल्टँदा एक नेपालीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा चितवनकी चेतमाया कुमाल रहेको बताइएको छ भने ५ नेपाली महिला घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा सँगै काममा गएका अनिश विश्वकर्मा, आरती श्रेष्ठ राई, उषा बर्तौला, अनिता बिक, अल्का भेटवाल
पोर्चुगलमा भयानक दुर्घटना : १ नेपालीको मृत्यु, राजदुतलाई श्रद्धान्जलीका लागी २ मिनेट समय पनि निस्किएन
पोर्चुगलमा गाडी दुर्घटनामा एक नेपालीको मृत्यु भएको छ भने छ जना नेपाली चेलीहरु घाइते भएका छन् । विदेशी भूमिमा त्यस्तो भयानक दुर्घटनामा नेपाली राजदुत अम्बिकादेबी लुइँटेलले पिडितलाई सहानुभुती नजनाएको भन्दै अहिले पोर्चुगल र युरोपभरि आलोचना भइरहेको छ । उक्त दुखद घटना भइरहेको समयमा नेपाली राजदूत श्रीमती अम्बिकादेबी लुइँटेल भने लन्च
कुवेत मा कार्यस्थलमै हृदयघातबाट एक नेपालीको मृत्‍यु !
कुवेतको अल्मुल्ला कम्पनीको सेक्युरिटी डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत जि फोर एस प्रोजेक्टमा सेक्युरिटी काम गर्दै आएका पाँचथरका देउमान तामाङको कार्यस्थलमै हृदयघात भएर मृत्यु भएको छ । उनी जनवरी २४ तारिकका दिन बिहान कुवेतको सार्कस्थित आफ्नै कार्यस्थलमा अकस्मात ढलेका थिए । अस्पताल लैजाने क्रममा नै उनको निधन भएको थियो । देउमानका मेनेजर सानु
नेपाल आउँदै भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, क–कसलाई भेट्ने ?
भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज आगामी साता नेपाल भ्रमणमा आउने भएकी छिन् । नेपाल सरकारको निमन्त्रणामा उनी २ दिने भ्रमणका लागि फेब्रुअरी महिनाको पहिलो साता काठमाडौं आउन लागेकी हुन् । नेपालमा रहंदा स्वराजले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला लगायत विभिन्न दलका नेतासँग कुराकानी गर्ने तयारी गरिएको छ । स्वराजको
अमेरीकाबाट एक नेपाली बिद्यार्थीलाई फर्काइदिएको छ । जनवरी महिनाको पहिलो साता सान्फ्रानसिस्को अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट सुरक्षा जाँचले नेपाल फर्काइदिएको हो । रमेश थापा (नाम परिर्बतन)लाई तीन वर्ष अमेरिका बसेका उनी नेपाल आएर फर्कने क्रममा अध्यागमनले सोधपुछ गर्दै फर्काइदिएको हो । उनको पढाई अलपत्र हुने देखिएको छ । उनी ओकल्याण्डस्थित लिंकन युनिभर्सिटीमा
‘माया मारिसकेको मान्छे सँग भिडियो कल – मरिसके भनेका श्रीमानसँग भिडियो कल
माघ ९ – गएको भदौ १२ गते । बिमला पाण्डे अरु दिन जस्तै कक्षामा हुनुहुन्थ्यो । पढाइरहेका बेला विदेशको नम्बरबाट फोन आयो । बिमलालाई फोनमा बोल्न मन लाग्दैनथ्यो । त्यसमा पनि विदेशको नम्बर देखेपछि को हो, के भन्नलाई फोन गरेको हो भन्ने सोचेर उहाँले सँगै पढाउने साथीको छेउमा गएर फोन
बिदेशी भुमि बाट एक श्रीमतीको कारूणिक पत्र ! सक्दो सेर गर्नुहोस
म तपाईलाई प्यार गर्छु । असीम प्यार ! र उस्तै सम्मान गर्छु । हृदय भक्कानिएर आऊँछ तपाईको श्रद्दामा । आनन्द यसरी भएर आउँछ कि आँखाहरू रसाएर आउँछन् र ओठको मुस्कानमा चन्द्रमा उदाएझैं चमक फैलिन्छ । तर तपाईँ यो सब कुरा विश्वास गर्नुहुन्न । भरोसा हुन्न तपाईंलाई मसँग । मसँग गणितको
भर्खरै बिदेशी भुमि दुबईमा घट्यो डर लाग्दो घट्ना ! सारा नेपालीको रुवाबासी
संयुक्त अरब इमिरेट्स ९यूएई० को दुबईमा बस दुर्घटना हुँदा २ नेपाली सुरक्षा गार्डसहित ७ जना कामदारको ज्यान गएको छ । ६ जना नेपाली गम्भीर घाइते भएका छन् । आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार मृत्यु हुनेमा वासुदेव लामिछाने र चितवनका कृष्णप्रसाद भुसाल छन् । घाइते हुनेमा चारआली झापाका २८ वर्षीय हरि धिमाल,